Zymplify: Suuqgeynta Adeeg ahaan Ganacsi Yaryar | Martech Zone
Horumarka degdega ah, qaabdhismeedka, iyo isdhexgalka ayaa sii wadaya inay dhigaan meherado suuqa ku yaal oo bixiya waxyaabo fara badan oo leh qiimo aad u hooseeya sannad kasta. Symmplify waa mid ka mid ah barnaamijyadaas - madal suuqgeyn suuqgeyn ah oo bixisa dhammaan astaamaha lagama maarmaanka u ah ganacsiyada yaryar si ay u soo jiitaan, u bartaan, ugana warbixiyaan raadadka internetka. Si kastaba ha noqotee, waxay ku sameysaa wax ka yar inta badan aaladaha kale ee otomaatiga suuq geynta suuqa.
Laga soo bilaabo goobta: Zymplify waa Suuqgeyn ahaan Adeeg ahaan. Waxaan bedeleynaa habka suuq-geynta iyo iibintu u shaqeeyaan oo aan ula jaanqaadno si aan mugdi lahayn ganacsigaaga. Kooxdayada 'ZympliGurus' ayaa gacanta ku haysa, dalab, si ay u bixiyaan talo khabiir ah iyo adeegyo suuq geyn dijitaal ah oo buuxa. Iyo xalkayaga oo dhan-in-one, waxaan ku siineynaa ganacsigaaga awood uu ku abuuri karo, ku daabici karo, ku raad raaci karo isla markaana uu ku falanqeyn karo dhammaan ololahaaga suuqgeynta iyo waxqabadyada hal madal isku dhafan.
Waxaa laga yaabaa waxa ugu fiican ee ku saabsan barxadda waa kharashka. Zymplify waxay leedahay hal qorshe oo aan qandaraas sanadle ah lahayn isla markaana aan lahayn khidmad sanadle ah. Ma jiraan wax lacag ah oo laga qaadayo xidhiidhada dheeraadka ah ama xadidaadda dadka lala xidhiidhayo. Sidoo kale, ma jiraan wax dejin dheeri ah, dusha sare ama khidmadaha la iska qaado. Xitaa waxaa ku jira dammaanad-celin 90-maalmood oo lacag-celin ah.
Kharashkaaga billaha ah sidoo kale waxaa kujira dhibco si aad taageero uga hesho ZympliGuru kooxda suuq geynta bil kasta.
Zymplify Suuq geynta adeeg ahaan ayaa ka mid ah
Goobaha Bogagga - Abuur, bilow oo raad raac ololeyaasha bogga soo dejinta kanaallada oo dhan
Foomamka & Bubbashada Boobka - Ka hawlgal foomamka websaydhka isku-dhafan iyo soo-saarista
Raadinta Booqashada Websaydhka -Bal eeg cidda booqaneysa boggaaga internetka iyo waxa ay sameynayaan
Email Marketing - Abuur ololeyaal emayl soo jiidasho leh si dhakhso leh oo fudud
Suuq-mobile - Si toos ah ula macaamil macaamiisha adoo adeegsanaya SMS-ka gudaha iyo dibedda
Suuqgeynta Bulshada PPC - La macaamil macaamiisha dhammaan barnaamijyada warbaahinta bulshada
Dhibcaha Channel - Raad-raac, turxaan-bixi oo cabir saameynta dadaallada suuq-geynta
Dhuumaha Iibka - Ku beddel ballanqaadyada iibka iyadoo loo marayo CRM isku dhafan
Muuqaalka Macaamiisha Kali ah - Aragtida isku dhafan ee dhammaan hawlgelinta macaamiisha iyada oo loo marayo kanaal CRM
Kalandarka Suuqgeynta - Lasoco dhamaan kanaaladaada adoo adeegsanaya jadwalka isku dhafan ee suuq geynta
Ololaha ROI - Ku cabir ROI isku dhafan ololaha iyo kanaalada
Gooldhalinta hogaanka - Codsiyada ku dalbo darajooyinka si aad u go'aamiso u diyaarsanaantooda iibka
Lookups Bulsho - Raadi astaamaha bulshada ee sida guud loo heli karo, sawirrada muuqaalka leh iyo saamaynta bulshada
Dhise Template - Way fududahay in la dhiso la hagaajin karo, bogga soo degitaanka moobiilka iyo sheybaarada emaylka
Kala-goynta - U dir farriin sax ah qofka saxda ah, markasta
Isdiiwaangeli Maxkamad Bilaash ah
Zymplify sidoo kale waxay bixisaa la-talinta iyo iskaashiga hay'adaha.
Tags: ololaha ROIkaararka goolashaCRMEmail Marketingfoomamkaboggaga soo degayadhibcaha hogaankasuuqgeyn ahaan adeeg ahaankalandarka suuq geyntamarketing mobilepop-upboogahappcsuuqgeynta ppcROIdhuumaha iibkaqaybintahal aragti macaamiilxayeysiinta bulshadaraadinta bulshadaraadinta warbaahinta bulshadatemplate dhiseraadinta booqdayaasha websaydhkasimplify